Muddo kororsi loo raadinayo RW cusub oo si ba’an looga horyimid | SMC
Home WARARKA MAANTA Muddo kororsi loo raadinayo RW cusub oo si ba’an looga horyimid
Muddo kororsi loo raadinayo RW cusub oo si ba’an looga horyimid
Dhammaan hoggaanka DG, Madasha Xisbiyada iyo Beesha Caalamka ayaa ka horyimid muddo kororsi loo raadinayo RW Cusub Rooble sida SMC aay ogaatay.
Dhawaqa ka soo yeeray saamileyda siyaasadda ayaa kusoo aadaya maalmo kadib markii Senator Cabdi Xasan Cawaale oo ay isku heeb yihiin Rooble uu iclaamiyey olole uu dheereysi ugu goobayo RW Rooble.
Qaydiid oo isku dayaya in uu qorshihiisa ku meelmariyo qaab qabiileysan ayaa kulan ka dhacay Muqdisho wuxuu ka tibaaxay in bulshadda ay kasoo jeedaan aanay u cutamin in ay bilooyin hayaan jagadaas.
Cabdi Qeybdiid ayaa meel fagaare ah ka sheegay Waad og-tihiin aniga ina Farmaajo [madaxweynaha Jamhuuriyadda] wanaag igalama-dhaxeeyo, waxaana u arkaa [in uu yahay]] nin waalan oo been badan, laakiin mar hadii ilaah ka soo qaaday in uu nin Habargidir ah magacaabay, waa in aanan marnaba ogolanin in uu noqda nin [Ra’iisul Wasaare] afar-biloodle ah oo waqti yar kurisga ku fadhiyay, anagana aan ku karaam,” ” ayuu yiri.
Waxaa ka mid ah ragga u jawaabay Cabdi Qeybdiid siyaasiga kaligii socodka ah ee Cabdiraxman Cabdishakur Warsame oo si toos ah ugu jawaabay Qaydiid ayaa ku waaniyey isaga iyo shaqisyaadka lamidka ah in aysan marnaba ku riyoon arrintaas. Cabdiraxman Cabdishakur ayaa aaminsan in Farmaajo & Fahad aay dagaal toos ah kula jiraan beesha uu ka dhashay ee Ceyr, maadaama laga saaray saaxadda siyaasadda, lagala wareegay hoggaanka Galmudug, gacantooda laga bixiyay Dhuusomareeb.
“Marka waxaan leeyahay si kaftanaa u sheegayaayee, waxa aan ku kala dhimanayo annaga iyo dadka muddo kororsiga ka cabsanaya meesha ma yaalaan. Waxaan rabnaa doorasho xilligeeda ku dhacda. Waqtigeeda lagu qabta, tii lagu heshiin lahaa ayaan rabnaa, taasaa Soomaali isku wada og-nahay,” ayuu ka yiri munaasabad lagu soo dhaweeyay heshiiskii doorashada 2020-21.
Villa Soomaaliya oo ku guuldareystay in ay fuliso balanqaayadii uu ololaha ku galay Farmaajaha waqtiga gabaabsiga ka yahay ayaa damacsan in ay hesho dheereysi ugu yaraan laba sano si ay dib ugu saxdo khaladaadkii ka dhacay.
Qodobadda uu Farmaajo ku guuldareystay waxaa kamid ah; in Al-Shabaab dalka uga xoreeyo laba sano, qabashada doorasho qof iyo cod ah, dhameystirka dastuurka, xasilinta caasimadda iyo qaar kale oo 2017-kii uu balanqaadey.
Golaha Shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta si aqlabiyad leh codka kalsoonida u siiyey ra’iisul wasaare Rooble taasoo la macno ah “in uu soo dhisi doono xukuumad tayo leh oo saldhigeedu noqon doono sideed  qodob”.
Previous articleRa’iisul Wasaaraha Cusub & Guddoonka Golaha Shacabka oo kulan yeeshay
Next articleTaliyaha Ciidamada AMISOM Oo Booqday Beydhabo Iyo Ujeedka